Notapahina nandritra ny filankevitry ny minisitra fa hohatsaraina ny fiahiana ara-tsosialin`ny mpiasa rehetra. Rehefa nisy ny fanapahan-kevitra noraisina mifandraika amin`izany dia omena telo (3) volana ny Tahirim-pirenena amin’ny fiahiana ara-tsosialy (CNaPS) hanohy ny fanentanana ho an`ny mpiasa rehetra hiditra ho mpikambana ao aminy. Aorian`izay, tsy maintsy manao fanambarana ny mpiasa rehetra ireo mpampiasa hisian`ny fiahiana ara-tsosialy amin`ireo mpiasa ao amin`izy ireo. Omena andraikitra ihany koa ny minisiteran`ny toekarena sy ny fitantanam-bola, ny minisiteran`ny asa, ny fampananan`asa, ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy miaraka amin`ny CNaPS hanao fanadihadiana momba ny fiahiana ara-tsosialy tokony ho an`ireo mpiasa mahaleotena tahaka ny mpamboly, mpanjono, mpivarotra ary mpanao asa tanana. Tokony hivoaka mialoha ny faran`ity taona ny valin`ny fanadihadiana hataon`izy ireo. Aorian`izay, tokony horaisina ireo fepetra rehetra amin`ny fiantohana ny fiahiana ireo mpiasa ireo raha sendra marary. Voalaza tao anatin`io filankevitry ny minisitra io ihany koa fa tokony hihatra manomboka ny 2020 ny fanamorana ny hahazoana fisotroan-dronono ary tokony hanavaozana hifanaraka amin`ny vanim-potoana ankehitriny ny didy aman-dalàna momba ny fiahiana sy ny fiarovana ara-tsosialy ny mpiasa. Notsiahivina ihany koa ny atao hoe asa mendrika araka ny famaritana nataon`ny OIT : asa ahafahana mamokatra sy ahazoana karama ara-drariny, asa misy fiarovana eny anivon`ny toeram-piasana ary misy fiahiana ara-tsosialy ho an`ny fianakavin`ny mpiasa … Marihina fa ny 6%-n`ny Malagasy no manana anton`asa mendrika sy mahavelona ny fianakaviany. Maro ihany koa ireo orinasa mampiasa olona an’arivony maro tsy manao fanambarana eny anivon’ny CNaPS ka maro be ireo mpiasa no very zo. Manararaotra ireo mpampiasa noho ny tsy fahampian’ny fanaraha-maso ka dia tsy mahalala akory fa misy zo tokony hositrahan’ireo mpiasa.